lending8, Author at Mission Asset Fund - Page2of 10
रिफ्लेक्स र रिफ्रेस गर्ने समय: मेरो सब्बेटिकल घोषणा गर्दै
lending8 मा डिसेम्बर 16, 2015 द्वारा लिखित।
जोसेफ क्विनोनेज, एमएएफ़ का सीईओ, O2 पहल द्वारा प्रायोजित तीन महीनाको sabbatical घोषणा गर्दछ।
म एक sabbatical लिदै छु!
O2 पुढाकारबाट एक उदार अनुदान को लागी धन्यवाद, म डिसेम्बर २१ मा तीन महिनाको sabbatical शुरू गर्छु। २०० Since देखि, मसँग pr states गैर नाफामुखी साझेदारहरूको राष्ट्रिय नेटवर्क भएको संस्थामा छिमेकको नाफामुखी संस्थाबाट एमएएफ निर्माण गर्ने सुअवसर छ, १ 18 राज्यहरूमा १ टीटी4टी प्रदान गर्दै। धेरै चुनौतिहरु पार गरेर र बर्षहरु को लागी धेरै सफलता प्राप्त पछि, म अब एक कदम फिर्ता लिन र हामीले हासिल गरेका सबै मा प्रतिबिम्ब गर्न को लागी समय आउँछ भन्ने लाग्छ - र MAF को लागी अर्को के हो कल्पना गर्न को लागी creditण निर्माण को उत्थान जारी रूपमा हामी राम्रोको लागि बल गर्नुहोस्, नयाँ साझेदारी बनाउनुहोस्, र नयाँ समुदायहरूमा विस्तार गर्नुहोस्।
प्रतिबिम्बित गर्न र पुनः ताजा गर्न मलाई समयको उपहार प्रदान गर्न मँ ever2 पहलको लागि म आभारी छु।
अर्को तीन महिनामा, म यात्रा गर्न र मेरो परिवारको साथ समय बिताउने, पुराना साथीहरूसँग पुन: जडान गर्ने, र हार्डकभर पुस्तकहरू पढ्ने आशा गर्दछु। मसँग मेरो नाइटस्ट्यान्डमा पुस्तकहरूको एक थाक रहेको छ मात्र टिप्न को लागी। म तिनीहरूको पृष्ठहरूमा थम्बो पर्खन सक्दिन।
मेरो अनुपस्थितिमा, MAF का प्रमुख अपरेटिंग अफिसर डानिएला सालास हेलमलाई कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा लिनेछ।
डानिएला हाम्रो स्थापना भएदेखि नै एमएएफको सफलताको पछाडि आलोचनात्मक शक्ति भएको छ र मलाई २०१ the को महत्वाकांक्षी योजनाको रूपमा यस संस्थाको नेतृत्व गर्ने उनको क्षमतामाथि पूर्ण भरोसा छ। हामी यसको अनुसन्धान एजेन्डालाई अगाडि बढाउनेछौं यसको प्रभावको अध्ययन गरेर। उपभोक्ताहरूको वित्तीय कल्याणमा Lending Circles; हामी हाम्रा ग्राहकहरूको Lending Circles का साथ अद्भुत अनुभव लिनको लागि विकास गर्ने टेक्नोलोजीमा नयाँ मैदान तोड्नेछौं; र हामी यो सुनिश्चित गर्न को लागी अतिरिक्त माईलमा जान्छौं कि हाम्रा साझेदारहरूसँग सही समुदायहरू छन् र उनीहरूको समुदायहरूमा सफलतापूर्वक Lending Circles कार्यान्वयन गर्न प्रशिक्षण।
म अप्रिल २०१ in मा सीईओको रूपमा मेरो भूमिकामा फर्कने आशा गर्दछु।
नवीकरण गरिएको ऊर्जाको साथ, हामी गरिबीको बिरूद्ध लड्न अगाडि बढ्ने र राम्रो बनाउने काम जारी राख्नेछौं। अगाडि!
यो के लायक छ: एमएएफ नयाँ पुस्तकमा चित्रित
lending8 मा नोभेम्बर 25, 2015 द्वारा लिखित।
आर्थिक कल्याणको बारेमा नयाँ पुस्तकमा सीईओ जोस क्विनोनेजको निबन्ध "वित्तीय छायाँमा ल्याटिनो" पढ्नुहोस्।
यस बर्षको सुरुमा मलाई सिटी फाउन्डेशनको सहयोगमा स्यान फ्रान्सिस्कोको फेडरल रिजर्व बैंक र कर्पोरेसन फर इन्टर्प्राइज डेवलपमेन्ट (सीएफईडी) को संयुक्त प्रकाशनमा एमएएफको परिप्रेक्षमा योगदान दिन आमन्त्रित गरिएको थियो। शीर्षकको नतिजा पुस्तक यो के लायक छ: परिवार, समुदाय र राष्ट्रको वित्तीय भविष्यको सुदृढीकरण, 30० भन्दा बढी निबन्धहरूको स collection्ग्रह हो जुन देशभरिका अमेरिकीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य र स्थिरताको दस्तावेज गर्दछ। लेखकहरूले कम आय र कम आबादीमा आर्थिक सुरक्षा र गतिशीलता सुधार गर्न आशावादी रणनीतिहरू राखे।
मेरो टुक्रा “वित्तीय छायाँमा ल्याटिनोहरू"आप्रवासी समुदायहरूमाझ रहेको अनौपचारिक ndingण दिने अभ्यासहरूलाई हाइलाइट गर्दछ, जसले वित्तीय मुख्यधारको बाहिर काम गर्ने व्यक्तिको जीवनमा उनीहरूले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकाको दस्तावेजीकरण गर्दछ। यो हाम्रो अनौपचारिक वित्तीय सम्बन्ध औपचारिकताका लागि हाम्रो Lending Circles कार्यक्रम मार्फत रणनीति समीक्षा गर्दछ र हाम्रो कामको प्रभावको प्रमाणित गर्दछ।
निबन्ध पनि परिचय गर्दछ वित्तीय आवश्यकताहरूको लागि Hierarchy (HFN), एक व्यक्तिको वित्तीय कल्याणको प्रमुख घटकहरूको पहिचान र मूल्यांकनको लागि एमएएफको नयाँ मोडल। एचएफएनले नीति निर्माताहरू, व्यवसायीहरू र उपभोक्ताहरूको वित्तीय स्थिरता र गतिशीलता सुधार गर्न काम गरिरहेका अरूलाई उनीहरूको प्रभावलाई अझ बढी समग्र ढate्गले मूल्याate्कन गर्न मद्दत पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउने र अत्यावश्यक फ्रेमवर्क प्रदान गर्दछ, जसले कामलाई आर्थिक स्वास्थ्यको ठूलो परिप्रेक्षमा राख्छ।
"वित्तीय छायाँमा ल्याटिनोस" को पीडीएफ डाउनलोड गर्न, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। को एक निःशुल्क प्रतिलिपि अर्डर गर्न के यो मूल्यवान छ पुस्तक, भ्रमण गर्नुहोस् कडा वित्तीय भविष्य वेबसाइट.
$1.5M चेस ग्रान्टले MAF लाई अर्को तहमा लैजान्छ
lending8 मा नोभेम्बर 24, 2015 द्वारा लिखित।
JPMorgan चेसले $1.5 मिलियन MAF मा Lending Circles अधिक छिटो विस्तार गर्न लगानी गर्दछ।
म घोषणा गर्न पाउँदा रोमाञ्चित छु कि JPMorgan चेसले हालसालै MAF लाई १TP2T1.5 मिलियन, तीन बर्षीय अनुदान प्रदान गरी हाम्रो हस्ताक्षर Lending Circles कार्यक्रम अमेरिकाभरि विस्तार गर्न जेपी मोर्गन चेस वित्तीय क्षमताको क्षेत्रमा अग्रणी रहेको छ वित्तीय छायाँमा उपभोक्ताहरूलाई अर्थपूर्ण सेवाहरू प्रदान गर्ने अग्रभागमा गैर-नाफामुखी संगठनहरूको क्षमता निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण, दीर्घकालीन अनुदानहरू प्रदान गरेर।
हामी उनीहरूको उदार अनुदानको लागि कृतज्ञ छौं, जसले एमएएफलाई देशको हाम्रो शून्य ब्याज १ टीटी T टी विस्तार गरेर जनताको वित्तीय जीवनमा दिगो र सकारात्मक प्रभाव ल्याउन अनुमति दिनेछ। JPMorgan चेसको साथ हाम्रो कामले हामीलाई ठूलो आत्मविश्वास दिन्छ किनभने हामी यस मोडललाई देशभरि कम आय भएका समुदायहरूमा स्केल गर्ने तयारी गर्छौं।
एमएएफ आगामी तीन बर्षमा हाम्रो १टीपी T टी प्रदायकहरूको नेटवर्क दोब्बर भन्दा बढीमा ट्र्याकमा छ, देशभरिका प्रमुख क्षेत्रहरूमा साझेदारहरूको महत्त्वपूर्ण समूह निर्माण गर्दै: न्यू योर्क, शिकागो र मियामीदेखि डेन्भर, लस एन्जलस र स्यान फ्रान्सिस्को। हामी मांग सहित loanण जानकारीको साथ Lending Circles सहभागीहरूलाई जडान गर्न नयाँ टेक्नोलोजी पनि विकास गर्नेछौं।
तपाईलाई, हाम्रा साथीहरु र सहयोगीहरु, विकासको यस रोमाञ्चक समयमा हामीलाई सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यबाद। हामी हजारौं अभिभावक, विद्यार्थी, र उद्यमीहरूले कडा मेहनत गरीरहेका अधिक सुरक्षित वित्तीय फ्यूचरहरू निर्माण गर्न यस अनुदानको लागि कथाहरू साझा गर्न पर्खन सक्दैनौं।
सान्ड्रा: एक कलाकार-उद्यमीले जीवनमा उनको दृष्टिकोण ल्याउँछिन्
lending8 मा अक्टोबर 29, 2015 द्वारा लिखित।
Sandra को यात्रा - र उनको सपनाहरु - मिशन समुदाय को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
Sandra को रचनात्मक शैली सबै उनको आफ्नै हो, तर उनको कथाले सम्पूर्ण समुदायको लागि बोल्दछ। उनी एक दूरदर्शी कलाकार र उद्यमी हुन्। सान फ्रान्सिस्कोको मिशन डिस्ट्रिक्टले पुस्तासम्म खेती गर्दै आएको छ। संग फ्रिसकोलिटास, उनको मोबाइल स्क्रिन प्रिन्टिंग व्यवसाय, उनले आफ्नो शिल्पलाई क्यारियरमा परिणत गरिन्। र को सहयोग संग व्यवसायको लागि MAF को Lending Circles, उनले फ्रिस्कोलिटासलाई अर्को तहमा लैजान आवश्यक फाउन्डेसन निर्माण गर्‍यो।
तर यो सब उनको गृहनगर मेक्सिकोको जकाटेकसमा शुरू भयो।
सान्द्रा १२ वर्षको मात्र थिइन जब उनकी आमा, जाकाटेकासकी एक्लो आमा वा बुबाले सानै फ्रान्सिस्कोमा बसाल्ने साहसपूर्वक निर्णय गरेकी थिइन् जसले अझ राम्रो जीवनको प्रतिज्ञाबाट प्रेरित थिए। मेक्सिकोबाट मिसनमा आउनु भनेको आमा र छोरीको लागि कडा संक्रमण थियो, तर उनीहरूले आफ्नो छनौटमा पछुतो गरेनन। उनको आमाको समर्थनका लागि धन्यवाद, स्यान्ड्रा आफ्नो नयाँ घरमा फस्टाइन्।
सान्ड्रासँग सधैं ठूलो परिवर्तनको लागि संसारको इच्छा थियो। उनको महत्वाकांक्षासँग मेल खाने कामको साथ, उनले सान फ्रान्सिस्को स्टेट युनिभर्सिटीबाट degrees डिग्री कमाइन। स्नातक पछि Sandra एक सामाजिक कार्यकर्ता को रूप मा एक क्यारियर शुरू भयो, तर उनको जिज्ञासु दिमाग सधैं नयाँ क्षेत्रहरु अन्वेषण को लागी थियो। उनले आफ्नो छिमेकीको बदलती जनसांख्यिकी देखी र उनको समुदायलाई पुनः आकार दिईरहेको बलको नोट लिई। उनलाई थाहा थियो कि उनी मिसनको अनौंठो स्वादलाई जीवितै राख्न चाहान्छिन् र यसको संस्कृतिमा उनको केहि योगदान दिन।
फ्रिसकोलिटास: मिसन उठायो
स्क्रिन प्रिन्टिंगमा उनको रुचि एक मंथन सत्रबाट शुरू भयो - सम्भावित व्यवसायिक अवसरहरूको बारेमा होईन, तर सस्तो उपहारका लागि विचारहरू जुन उनले परिवारलाई दिन सक्छिन्। २०११ को जाडोमा स्यान्ड्राले उनको नेटवर्कमा साथीहरूसँग सम्पर्क राखिन् जसले जीवनको डिजाइनहरू जीवनमा मद्दत गर्न सक्दछन् जुन त्यतिन्जेल केवल उनको कल्पनामा अस्तित्वमा थियो। नतिजा: सान्द्राको विशिष्ट टेकमा सुन्दर टी-शर्टहरू दीया डे लस मुर्तोस "कालाकस" (खोपडी) मा मिसन गर्वका साथ झुक्किएको।
के यो एक आफैलाई उपहार विचार को रूपमा शुरू भयो यस उद्यमीको लागि एक व्यवसाय उद्यम बनेको छ। अब उनी आफ्नो टि-शर्टहरू स्थानीय कला ग्यालरीमा समुदायमा ल्याउँछिन्,
रेस्टुरेन्ट, कन्सर्ट र उत्सवहरू। फ्रिसकोलिटासको बढ्दो क्लाइन्टेल छ, यसको अनौंठो कलात्मक शैली र यसको प्रामाणिक मिशन जडहरू द्वारा आकर्षित। यो बढ्दो मागको बाबजुद, सान्ड्राले एक अवरोध मारी। त्यो एक किफायती व्यवसाय secureण सुरक्षित गर्न को कारण संघर्ष गर्योaकम क्रेडिट स्कोर.
त्यो जब उनले MAF भेट्टायो।
व्यापार कार्यक्रमको लागि हाम्रो Lending Circles मार्फत, सान्ड्राले उनको क्रेडिट स्कोर 800०० भन्दा बढि बनाई, उनको आत्मविश्वास बढाइरहेको छ र उनको व्यापार loansणमा धेरै राम्रो सर्तहरूको साथ पहुँच दिएर। उनको शून्य-ब्याज सामाजिक .ण फ्रिस्कोलिटास वेबसाईटलाई फन्डि। गर्दैछ त्यसैले सान्ड्राले अन्ततः उनको काम अनलाइन प्रदर्शन गर्न सक्दछ र आफ्नो छिमेक भन्दा टाढा दर्शकहरु सम्म पुग्न सक्छ।
ग्राहकहरू फ्रिसकोलिटास केवल टी-शर्ट भन्दा बढी छोड्दछन्। स्यान्ड्राले भनेझैं उनीहरूले "उनको कला बोक्छन्", उनीहरूको साझा पहिचानको अभिव्यक्ति सहित संसारमा फर्केर। र त्यहाँ मिसनको संस्कृतिको शक्ति र यसको समुदायको बन्धनको राम्रो प्रतीक छैन।
क्रिसको परिचय दिँदै, एमएएफको उत्पादन प्रबन्धक
lending8 मा सेप्टेम्बर 24, 2015 द्वारा लिखित।
क्रिस सामाजिक परिवर्तनको सेवामा डाटा र टेक्नोलोजी राख्ने लक्ष्यमा छन्।
तपाईंले वर्षौंदेखि याद गर्नुभयो होला, हामीले रेसिडेन्सी इन सोशल ईन्टरप्राइज (आरआईएसई) फेलोहरू नयाँ सेक्टर एलायन्सका साथ महान भाग्य पाएका छौं। आज, हामी त्यो स्ट्रिम जारी राख्छौं:
हामी क्रिस फेररलाई भेट्न उत्साहित छौं, एक पूर्व RISE साथी जो अब MAF को उत्पादन प्रबन्धकको रूपमा सेवा गर्दैछ।
क्रिसले भर्खरै सेन्टर फर केयर इनोभेसनस (सीसीआई) मा आफ्नो फेलोशिप पूरा गर्यो, जहाँ उसले सेशफोर्समा ड्यासबोर्डहरू र जटिल रिपोर्टहरू सिर्जना गर्‍यो जसले मुख्य प्रदर्शन सूचकहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ र ती निष्कर्षहरूलाई उनीहरूको पहिलो-पहिलो वार्षिक रिपोर्टमा अनुवाद गर्दछ। अब, क्रिसले ती विश्लेषणात्मक कौशलहरू एमएएफमा ल्याउँदैछ।
ऊ चाँडै नै हाम्रो निवासी सेल्सफोर्स गुरु भएको छ।
CCI मा आफ्नो काममा, क्रिसलाई सामाजिक परिवर्तनलाई प्रभाव पार्न डेटा लिभोर गर्ने तरिकाहरू खोज्न मन पराउँथे। उनी स्वाभाविक रूपमा एमएएफमा यस भूमिकाका लागि आकर्षित थिए, जसले उसलाई आवेदन गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ
उसको विशेषज्ञता र हाम्रो सेल्सफोर्स प्लेटफर्म सुधार - साथै हाम्रो ग्राहकहरूको सेवा गर्न मोबाइल अनुप्रयोग विकास गर्ने नयाँ चुनौती।
क्रिस खास गरी “मल्टिफाइस्टेड दृष्टिकोणबाट प्रभावित भयो जुन एमएएफले प्रत्यक्ष सेवा मार्फत लिन्छ,” जसले हामीलाई कम आय भएका व्यक्तिहरूलाई buildण बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। हाम्रो सेवाहरूको आलोचनात्मक मूल्यांकन गर्न र तिनीहरूको सफलता नाप्नका लागि एमएएफले गरेको प्रयासको पनि उहाँ सराहना गर्नुहुन्छ, सँधै नयाँ अवसरहरूको खोजीमा तिनीहरूलाई सुधार गर्ने।
"मलाई लाग्छ कि यो एक आदर्श र प्रभावकारी मोडल हो कि समग्र प्रभाव परिवर्तन गर्न।"
क्रिस माउइमा हुर्केका थिए क्लेरमोंट म्याकेन्ना कलेजमा जानु भन्दा पहिले, जहाँ उनले दर्शन र साहित्यमा मेजर गरे। उसको कलेजको वर्षको मुख्य घटनाहरू पेरिसमा विदेशमा पढ्दै थिए। माउइमा हुर्किए पनि, उहाँ एक भयानक सर्फर भएको स्वीकार्नुहुन्छ - तर "तपाईंलाई पतनको बारेमा केही सुझाव दिन सक्छ।"
क्रिस एक विशाल फुटबल प्रशंसक हो र ब्रिटिश क्लब चेल्सी हेर्न मन पराउँछन्। उसलाई नयाँ संगीत सुन्न रमाईलो लाग्छ र नयाँ खाना पकाउन मन पर्छ। जब मैले उनलाई सोधें कि यदि उनी अरू केहि रमाईलो तथ्यहरु बाँड्न चाहन्छन् भने, उनले भने, "मलाई चीज मन पर्छ!"
Kelsea, हाम्रो नयाँ विकास प्रबन्धकलाई भेट्नुहोस्
lending8 मा अगस्ट 31, 2015 द्वारा लिखित।
Kelsea MAF मा मुख्य धारा वित्तीय सेवामा बाधा तोड्नको लागि जुनसुकैको साथ आउँदछ।
नयाँ ठाउँमा कुनै अपरिचित छैन, Kelsea McDonough संसारभरि बसोबास गर्दै छ: सान्टियागो, चिली, र ग्रेनाडा, स्पेनको, स्यान फ्रान्सिस्को र ओकल्यान्डसम्म, जुन उनी अब घर कल गर्न गर्व गरी। तर उनी मूल रूपमा बोस्टनकी हुन्, जहाँ उनी टफ्स विश्वविद्यालयबाट स्पेनिश र मनोविज्ञानको डिग्री लिएर स्नातक भएकी छिन्।
बोस्टन मा आफ्नो formative वर्षहरु को समयमा,
Kelsea एक आप्रवासी वकालत गैर नाफामा स्वैच्छिक र बलात्कार संकट केन्द्र मा काम गर्नुभयो। त्यसपछि उनले प्रिस्पुलरहरूलाई अ teaching्ग्रेजी पढाउँदै स्पेनको ग्रेनाडामा एक वर्ष बिताउने मौका पाइन्। फिर्ता भएपछि, उनले खाडी क्षेत्रमा उनको लागि मार्ग बनाई। उनले ओपेल्याण्ड नाफा नकमाउने ओक्ल्यान्ड नाफामुखी संस्था, प्रोसेपरा (पुरानो ब्याग्स: वुमन एक्शन टू गेन इकोनॉमिक सिक्योरिटी) मा फण्ड विकासमा धेरै वर्ष काम गरे जसले कम आय भएका ल्याटिनसलाई कामदार सहकारी संस्था बनाउन सहयोग गर्दछ। त्यस समयमा, केल्सीले सान फ्रान्सिस्कोको WOMAN Inc. मा घरेलु हिंसा सल्लाहकारको रूपमा पनि स्वेच्छा दिए।
उनले २०१ MA मा पहिलो पटक MAF को बारेमा सिकिन्।
एक सहकर्मी केलसिया आएकी उनको Lending Circles को माध्यम बाट बृहत अनुभव निर्माण क्रेडिट को बारे मा उग्र, र Kelsea तुरुन्त सहकर्मीहरूको एक समूह संग एक लेन्डिंग सर्कलमा सामेल गर्न प्रेरित गरियो। उनी अझै आफ्नो सर्कल बनाउने दिन सम्झन्छिन्, जसलाई उनीहरूले "सेलेरी स्टिक्स विथ बफेलो सॉस" नाम दिए जुन उनीहरूले खाजा खाइरहेका थिए।
Kelsea दृढ विश्वास छ कि हामी अमेरिका मा कम आय समुदायहरु को लागी वित्तीय मुख्य प्रवाह मा बाधा को तोड्न पर्छ, र उनी धेरै वर्ष को लागी MAF को अभिनव Lending Circles रणनीति सराहना गर्यो। जब उनी एमएएफको रंगीन, उच्च उर्जा अफिसमा छिर्छिन् त्यस क्षणबाट उनी प्रभावित भइन् कि कसरी टीमले दैनिक आधारमा यसको मूल्यमान्यताहरू जीवन बिताउँछ।
"अब म यहाँ छु, हरेक दिन म कम टोलीका उपभोक्ताहरूका लागि अर्थपूर्ण वित्तीय उत्पादनहरू सिर्जना गर्न खामलाई समेट्न सम्पूर्ण टीमको अभियानबाट प्रेरित हुँ।"
Kelsea के MAF को बारे मा यति प्रेरणादायक भेट्छ? "सबै कुरा!" उनी भन्छिन्, "तर म विशेष गरी मोहित छु कि एमएएफले कसरी ndingण दिने र orrowण लिने अनौपचारिक समुदाय प्रथालाई माथि उचाल्छ र तिनीहरूलाई औपचारिक बनाउँछ ताकि मानिसहरूले वित्तीय मूलधारमा प्रवेश गर्न सकून्।" प्रोसेपरामा कार्यमा समान शक्ति-आधारित दृष्टिकोण देखेर, उनी विश्वास गर्छिन् कि यो सामाजिक परिवर्तन प्राप्त गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका हो। Kelsea पनि एमएएफ क्षमता निर्बाध यति धेरै क्षेत्र नेविगेट गर्न को लागी समुदाय विकास र सम्पत्ति निर्माण देखि वित्तीय समावेशीकरण र FinTech सम्म प्रशंसा गर्दछ।
आज, केल्सीएले एमएएफको व्यक्तिगत दाता कार्यक्रमको बृद्धि गर्दछ र हाम्रो समग्र मार्केटिंग र विकास प्रयासहरूलाई समर्थन गर्दछ। अधिक आर्थिक गतिशीलताको आवश्यकताको बारेमा बढ्दो सांस्कृतिक चेतनाको साथ - विशेष गरी खाडी क्षेत्र जहाँ आय असमानता आसमान छ - एमएएफको कार्यक्रमहरूको लागि सहयोग जुटाउने समय उपयुक्त छ। परोपकारी व्यक्ति एक साथ संसार ल्याउन को लागी ल्याउँछ जहाँ सबैले फल फल्छ।
Kelsea MAF देश भर मा Lending Circles को मापन गर्न को लागी बोल्ड योजना को महसुस गर्न मदत गर्न उत्साहित छ।
उनको खाली समयमा, Kelsea बाइक द्वारा खाडी क्षेत्र को अन्वेषण, कुंडलिनी योग अभ्यास, र Merritt ताल वरिपरि आरामदायी टहल लिन मजा छ। उनीसँग पनी पसी संगीतको अतुलनीय प्रेम छ र कुनै पनि र सबै अवसरहरूको लागि प्लेसूचीहरू (दुबै चीसी र गैर-चेसी) बनाउँदछ।
पार्टनर सफलता टीम मा एलेना स्वागत छ
lending8 मा अगस्ट 10, 2015 द्वारा लिखित।
समुदायहरूलाई सशक्त पार्न र उदीयमान उद्यमीहरूका लागि एलेनाको जोशले एमएएफलाई एक प्राकृतिक फिट बनाउँदछ।
इलेना फेयरली एकदम नयाँ MAFista हो, तर उनको MAF सँगको जडान तीन बर्ष पहिले शुरू भयो। उनले पहिलो पटक क्यालिफोर्निया को-ऑप सम्मेलनको एक प्रस्तुतीकरणको बेलामा एमएएफको बारेमा सुनेकी थिइन। उनी स्थानीय समुदायका सदस्यहरू र उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा उत्साहित थिइन्, त्यसैले सामाजिक ndingण दिने विचारले उनलाई तुरून्त क्लिक गर्‍यो।
चाँडै, उनले लेन्डि C सर्कलमा आफ्ना साथीहरूको समूहको आयोजन गर्‍यो।
अहिले पनि, एलेनाको उनको लेन्डि C सर्कलको अनुभव जटिल र न्यानो छ: उनी कथाहरू, खाना, र हाँसो साझा गर्न सम्झन्छे, र एक अर्कालाई समर्थन गर्दछन् उनीहरूको लक्ष्य प्राप्त गर्न। उनको सर्कलले आफूलाई "पवित्र बाँदरहरू, हामीले क्रेडिट पाएका छौं" भन्ने नाम दियो। - एक क्रेडिट जुन साँचो हो कि उनीहरूको क्रेडिट स्कोर मा ठूलो वृद्धि दिए।
ओलिम्पस डिजीटल क्यामेरा
भन्नु पर्दैन, एलेना तबदेखि नै एमएएफको प्रशंसक भइन्।
ओक्ल्यान्डमा बसोबास गर्नु भन्दा पहिले, एलेनाको जन्म पोर्टलैंडमा भएको थियो वा ओर्, र कोलोराडो कलेजबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्रको डिग्रीको साथ स्नातक भएको थियो। तपाईं हुन सक्छ
उसले घर बोलाएको स्थानहरूको सूचीबाट अनुमान लगाउनुहोस्, उनी आउटडोर साहसिक कट्टर छन्। जब उनी काममा छैनन्, तपाईं उनलाई बाहिर भेट्टाउन सक्नुहुन्छ, रक क्लाइम्बि,, सर्फिंग, पर्वतारोहण, र साइकल यात्राको बीचमा समय छुट्याएर।
MAF लाई यो जडान कुनै दुर्घटना थिएन।
एलेना समुदायको शक्तिमा एक लामो समयदेखि विश्वासी भई एक अर्कालाई सहयोग पुर्‍याउन आएका छन्। एमएएफमा आउनु भन्दा पहिले, एलेना प्रोस्पेरा (पहिले WAGES) मा लर्निंग र पार्टनरशिप निर्देशक थिए। यो ओकल्यान्ड गैर नाफामुखी लेटिना उद्यमीहरूलाई प्रशिक्षण र सहायता प्रदान गर्दछ ताकि उनीहरूले सह-अप्स निर्माण गर्न सक्नेछन् - स्थानीय व्यवसाय जुन सामूहिक रूपमा श्रमिकहरूको स्वामित्वमा हुन्छ।
प्रोस्पेरामा, एलेनासँग दृढ संकल्पित, उद्यमी महिलाहरू एक साथ आउने, उनीहरूको सीप र स्रोतहरूको पोखरी गर्ने, व्यवसाय सुरू गर्ने, र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अनौंठो अनुभव थियो। धेरै जस्तै Lending Circles, को-अप्सहरू समुदायहरूको शक्तिको लाभ उठाउने बारेमा हुन्छन्।
त्यसोभए किन म्याफ?
दोस्रो उनले यो अवसर देखी, एलेनाले एक सम्बन्ध महसुस गरे। यो एक रोमाञ्चक भूमिका थियो, संस्थामा काम गर्ने अवसर जुन उनी यति लामो समयसम्म प्रशंसा गर्छिन् - एक सम्भावना जुन उनले नयाँ खोजी गर्नुपर्‍यो। एलेना MAF को नयाँ नयाँ पार्टनर सफलता प्रबन्धकको रूपमा भाडामा लिइएकोमा रोमाञ्चित छ। उनी ओएक्ल्याण्डको गेम थ्योरी एकेडेमीदेखि शिकागोमा पुनरुत्थान परियोजनासम्म एमएएफका विविध साझेदारहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्न अगाडि छिन्।
हस्टनमा क्रेडिट पर्दाको पछाडि
lending8 मा जुलाई 19, 2015 द्वारा लिखित।
टेक्सासको यात्रा क्रेडिट अदृश्य बारेमा कुरा गर्न र कसरी Lending Circles मद्दत गर्न सक्छ
हालसालैसम्म, मेरो टेक्सासमा बिताएको समय चिलीको स्यान्टियागोमा विदेशको अध्ययन पछि एकै द्रुत स्टपमा सीमित थियो। DFW विन्डोजमा चित्रित र beautiful्गीन परिदृश्यहरू लिनको लागि मसँग कतै समय थिएन, म फेरि हावामा फिर्ता हुनुभन्दा अघि। त्यसकारण म समुदाय-आधारित संगठनहरूको ठूलो समूहको लागि Lending Circles को बारेमा एक कार्यक्रमको हेडलाइन गर्न हाम्रो सीईओ जोसेसँग ह्युस्टन जाने केही समय लिन भनिएकोमा म खुसी थिए। मलाई के आशा गर्ने थाहा थिएन।
मेरो आँखा प्रत्याशाहरूसँग फराकिलो थियो किनकि जोसले मलाई के गर्दैछ भनेर बताए।
म Lending Circles को क्रेडिट निर्माण फाइदाहरूको बारेमा ठूलो, नयाँ श्रोताहरूसँग कुरा गर्ने आशाको साथ उत्सुक थिए।
अवश्य पनि, म हप्तामा हप्ता देशभरमा पार्टनर संगठनहरूसँग फोनमा कुरा गर्छु, र म प्रायः साझेदारहरूको लागि वेबिनरहरूको नेतृत्व गर्दछु, तर गैर-भर्चुअल तरिकामा प्रस्तुत गर्न विदेशी (तर स्फूर्तिदायी) महसुस गर्‍यो। प्रत्येक दिनको MAF मा नयाँ साहसिक कार्य हो, तर त्यो साहसको लागि सजिलो संरचना हुन्छ। मलाई सामान्यतया थाहा छ मेरा कुन सहकर्मीहरूसँग मैले कुरा गर्न आवश्यक छ र तिनीहरूलाई के प्रश्नहरू सोध्नु पर्छ। म धेरै बहुमूल्य संगठनहरू आमने सामने भेट गर्न पाएकोमा कृतज्ञ छु।
मेरो पेटमा केही पुतलीहरू र खुला दिमागका साथ मैले होटल छोड्दा, मैले उबरमा फक्रें र ग्रेटर ह्युस्टनको युनाइटेड वेमा गएँ। जेपी मोर्गन चेज, विज्ञ र युनाइटेड वे सँगै आएका थिए हामीलाई कार्यक्रम होस्ट गर्न मद्दत गर्न ताकि हामी ह्युस्टनमा गैर-नाफामुखी मानिसहरूसँग कुरा गर्न सकौं। हाम्रो राष्ट्रव्यापी नेटवर्कमा सामेल हुँदै Lending Circles प्रदायकहरूको।
मेरो उबर ड्राइभर, जेम्सले मलाई ह्युस्टन समुदायको अचम्मको विविधताको बारेमा बताए जब उनले मलाई शहर भरि भगाए। उनले सबै नयाँ संस्कृतिहरू जो एकसाथ बढिरहेका थिए र नयाँ सानो एन्क्लेभ र वरपरका ठाउँहरूबारे कुरा गर्दै थिए जुन आश्चर्यजनक देखिन्थ्यो। उनले भने कि हालसालैका वर्षहरूमा प्रभावकारी जनसंख्या वृद्धिका कारण यो पुनर्जागरण हालै तीव्र भएको छ। मलाई यस्तो शहरमा छु जस्तो लाग्थ्यो जुन त्यस्तो आश्चर्यजनक गतिमा सँगसँगै बढिरहेको थियो।
तर मलाई दांव पनि थाँहा थियो। हस्टन मेट्रो एरियामा ज्यादै धेरै अनबन्क र भूमिगत परिवारहरू छन् (1 1 १ टी ११ टी)। त्यो ह्युस्टन क्षेत्रमा १/3 भन्दा बढी परिवारहरू हो जुन भूमिगत र क्रेडिट अदृश्य छ।
यसको शीर्षमा, हस्टन परिवारहरूको .9 43.TP१टीपी १ टी लाई "तरल सम्पत्ति गरीब" मानिन्छ (जसको मतलब तिनीहरूसँग पर्याप्त क्रेडिटमा पहुँच छैन भने दीर्घकालीन वित्तीय आपतकालबाट टाढा आपतकालीन खर्च हो)। यसले मात्र मेरो उर्जाको बारेमा कुरा गर्ने मेरो उद्देश्य बनायो जुन Lending Circles ले अझ महत्वपूर्ण प्रदान गर्न सक्छ। सबै उपस्थित व्यक्तिहरू कफी र बिहानको खाजामा बसेपछि टेक्सास गैर-नाफामुखी संस्थाका 70० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू कोठामा थिए! हामी जबरजस्ती टर्न-आउट द्वारा उत्साहित थिए।
प्रस्तुतीकरण ग्रेटर ह्युस्टनको युनाइटेड वेबाट शुरु भयो र त्यहाँ उपस्थित सबैलाई स्वागत गरियो, त्यसपछि विशेषज्ञको क्यारोल उर्टन र जेपी मोर्गन चेजको यवेट रुइजले छोटो परिचय दिए। जोसेले भने ढुकुर, निडरताका साथ, को एक संगठन को रूप मा MAF को बारेमा कुरा गर्न र यो कसरी एक अर्कालाई आर्थिक सहयोग गर्न एक साथ आउने व्यक्तिको अवधारणा औपचारिक बनायो।
जोसको नेतृत्व अनुसरण गर्दै, म पोडियममा गएँ र मेरो स्थान लिएँ, सहभागी र पार्टनरको लागि सम्बन्धित दायित्वहरूको साथ सुरू गरेर ग्राहकहरू भर्ना गराउन र १ टीटी T टी सिर्जना गरियो। यो सम्भावित प्रदायकहरूको यस समूहलाई जोड दिन यो महत्वपूर्ण थियो कि कसरी अधिक मजबूत सामाजिक platformण प्लेटफर्ममा संक्रमणले टेक्सास जस्ता राज्यहरूमा +०+ १टीपी T टी साझेदारीलाई सम्भव बनाएको छ, दुवै प्लेटफर्ममा क्षमता र प्रयोगकर्ता अनुभवको वरिपरि डिजाइन गरिएको प्लेटफर्म। र ग्राहकहरु
भीडको संलग्नताबाट म विनम्र भएँ।
यो स्पष्ट थियो कि प्रत्येक व्यक्तिले एक अर्कालाई पुरानो साथीहरूले जस्तो स्वागत गरेका बस्तुबाट जान्दछन्। यद्यपि घटनामा सबैजना मेरो लागि नयाँ चिनजान भए, एक लेन्डि C सर्कल साथीबाट दुई कर्मचारी सदस्यहरू उपस्थित थिए: हस्टन-आधारित चिनियाँ समुदाय केन्द्र। यो पार्टनर पाँच वर्तमान प्रदायकहरु मध्ये एक हो जुन टेक्सासमा Lending Circles प्रदान गर्दछ: परिवार पाथफाइन्डरहरू, YWCA फोर्ट वर्थ, र एल पासो सहयोगी, अप्रिल २०१ in मा एक नयाँ पार्टनरमा हस्ताक्षर गरियो।
एक मात्र प्रश्न बाँकी छ: ह्युस्टनको organizations० संस्थामध्ये कुनचाहिं अर्कोसँग काम गर्ने छ?
एनसीएलआरले २०१ MA परिवार सुदृढीकरण पुरस्कारको साथ एमएएफ प्रस्तुत गर्दछ
lending8 मा जुलाई 11, 2015 द्वारा लिखित।
एनसीएलआरबाट प्राप्त यो मान्यताले मेहनती परिवारहरूको लागि उचित वित्तीय बजारतर्फको मार्ग प्रशस्त पार्न मद्दत गर्दछ
कन्सास सिटी, मो।- कान्सास शहरमा २०१ Conference NCLR वार्षिक सम्मेलनमा आज आयोजित राष्ट्रिय सम्बद्ध लन्चमा, मो, एनसीएलआर (ला रजाको नेशनल काउन्सिल) लेटिनो परिवारको सशक्तीकरणका लागि उनीहरूको उल्लेखनीय प्रयासका लागि एनसीएलआर एफिलियट नेटवर्कसँग सम्बन्धित दुई समुदायमा आधारित संगठनलाई मान्यता दियो। र उनीहरूको लागि बृहत अवसरहरू उपलब्ध छन्। यस बर्षका पुरस्कृतहरू सान फ्रान्सिस्कोमा १टीपी T टी र क्यान्सास शहरमा मो।
"हामी २०१TP एनसीएलआर वार्षिक सम्मेलनमा काम गर्नका लागि १ ल्याटिपो their टी र गुवादालुप केन्द्रहरुलाई सम्मान गर्दैछौं जसले युवा ल्याटिनो र उनीहरूको परिवारको जीवनलाई परिवर्तन गरेका छन। उनीहरूको समर्पण र सफलताले हाम्रो सम्पूर्ण समुदायलाई सुदृढ पार्छ, "एनएलएलआरका अध्यक्ष र सीईओ जेनेट मुर्गुआले भने। "हामी यी अनुकरणीय संगठनहरू र क्यान्सास शहर र स्यान फ्रान्सिस्कोका हिस्पैनिक समुदायहरूलाई सुरक्षित creditण र सस्तो स्वास्थ्य सेवामा पहुँच गर्न मद्दत गर्न उनीहरूको अभिनव दृष्टिकोणको सराहना गर्दछौं।"
वार्षिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको, एनसीएलआर परिवार सुदृढीकरण पुरस्कार कार्यक्रम र सेवाहरूको संयोजनको माध्यमबाट हिस्पैनिक समुदायको सफलता र बलको अभिवृद्धि गर्न उनीहरूको प्रतिबद्धताका लागि दुई एनसीएलआर-सम्बद्ध समुदाय-आधारित संगठनहरूलाई सम्मान गर्दछ। प्रत्येक प्राप्तकर्ताले $5,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्दछ समुदायमा उनीहरूको काम र NCLR सँगको उनीहरूको साझेदारीमा काम गर्नका लागि।
२०० in मा स्थापित, १TP5T मेहनती र कम आय भएका परिवारहरूको लागि उचित वित्तीय बजार बनाउनको लागि काम गर्दछ जसले पहुँच र स्रोतहरूको अभाव गर्छन् उनीहरूको वित्तीय लक्ष्यमा पुग्न। यस संस्थालाई यसको नवीन Lending Circles कार्यक्रम, एक शून्य ब्याज क्रेडिट-निर्माण सामाजिक loansण कार्यक्रम को लागी मान्यता दिइएको थियो जसले कम आय भएका परिवारहरुलाई वित्तीय मूलधारमा बुनाउन सहयोग पुर्‍याएको थियो। कार्यक्रमले सहभागीहरूलाई क्रेडिट स्कोर र क्रेडिट इतिहास निर्माण गर्न र वित्तीय स्थिरता प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ।
"हामी यस बर्ष एनसीएलआर परिवार सुदृढीकरण पुरस्कार को प्राप्तकर्ता को रूपमा छनौट भएकोमा रोमाञ्चित छौं," १टीटी T टीका सीईओ जोसे क्विनोनेजले भने। “एनसीएलआरबाट प्राप्त यो मान्यताले हामीलाई अमेरिकामा मेहनती परिवारहरूको लागि उचित वित्तीय बजारतर्फको मार्ग प्रशस्त पार्न मद्दत गर्दछ, हामी देशभरि हजारौं invण अदृश्यहरूको पहुँच विस्तार गर्छौं, ताकि उनीहरूले वेतनदयी fromणदाताहरूबाट सिकारी loansणमा अडिग रहेनन् र यसको सट्टामा उनीहरूको जीवनको अर्को वित्तीय कदम चाल्न समुदायको सामर्थ्यको आधारमा। "
लगभग १ शताब्दी पहिले स्थापना भएको १ century १ in मा, गुवाडालुप केन्द्रहरू, इंक। कन्सास शहरमा मो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा ल्याटिनोको लागि पुरानो अपरेटिंग समुदायमा आधारित संस्था हो। शैक्षिक, सामाजिक, मनोरन्जन र सांस्कृतिक सेवाहरूको एक विस्तृत सेट, गुआडालुप केन्द्र, इंक। को माध्यमबाट हिस्पैनिकहरूका लागि जीवनको गुणस्तर बढाउँदै ल्याटिनो परिवारहरूको जीवन सुधार गर्दैछ। यो समूह गुआडालुप शैक्षिक प्रणालीको सुरूवातको लागि मान्यता प्राप्त थियो, चार्टर स्कूल प्रोग्राम जसले ल्याटिनो K – १२ बिद्यार्थीहरूको लागि कठोर र समृद्ध गर्ने शिक्षा अनुभव प्रदान गर्दछ। यस कार्यक्रमको माध्यमबाट गुआडालुप केन्द्र, इंक। ले कान्सास सिटी ल्याटिनोलाई असर गर्ने शैक्षिक खामाहरू समाधान गर्न र युवा विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको पूर्ण क्षमतामा पुग्न सशक्तीकरण गर्दैछ।
"96 years बर्षको सेवाको अवधिमा, गुआडालुपे केन्द्रहरू, इन्क। लेटिनो समुदायको लागि शैक्षिक कार्यक्रमहरू प्रदान गरीरहेका छन्। हामी यी प्रयासहरूमा एनसीएलआरसँगको सहकार्यको कदर गर्दछौं र यो सम्मान प्राप्त गर्न पाउँदा सम्मानित छौं, ”गुआडालुप केन्द्र इंक, सीईओ क्रिस मेदिनाले भने।
एनसीएलआर - संयुक्त राज्य अमेरिका मा सबै भन्दा ठूलो राष्ट्रीय हिस्पैनिक नागरिक अधिकार र अधिवक्ता संगठन - हिस्पैनिक अमेरिकीहरुलाई अवसरहरु लाई सुधार गर्न को लागी काम गर्दछ। एनसीएलआर मा अधिक जानकारी को लागी, कृपया भ्रमण गर्नुहोस् www.nclr.org वा साथ पछ्याउनुहोस् फेसबुक र ट्विटर.
डीसी क्षेत्र मा नयाँ Lending Circles कार्यक्रम
lending8 मा जुलाई 8, 2015 द्वारा लिखित।
Lending Circles वाशिंगटन, DC मा डेब्यू गर्न व्यक्ति र उद्यमीहरुलाई क्रेडिट बनाउन सहयोग गर्न
ल्याटिनो आर्थिक विकास केन्द्र र उत्तरी भर्जिनिया परिवार सेवाले एमएएफ र क्यापिटल वनको साझेदारीमा पियर-टु-पियर ndingण दिने कार्यक्रम सुरू गर्‍यो।
वासिंगटन डिसी - जुलाई,, २०१ – ल्याटिनो आर्थिक विकास केन्द्र र उत्तरी भर्जिनिया परिवार सेवा आज DMV को शुभारंभको घोषणा Lending Circles, वाशिंगटन, डीसी, भर्जिनिया र मेरील्याण्डमा एक नयाँ पियर-टु-पियर ndingण दिने कार्यक्रम, जसले एमएएफसँग साझेदारीमा कम आय भएका हिस्पैनिक समुदायहरूलाई शून्य ब्याज loansणको साथ safelyण सुरक्षित बनाउन मद्दत गर्दछ। Lending Circles मार्फत गरिएको paymentsण भुक्तान क्रेडिट ब्यूरोलाई रिपोर्ट गरिएको छ, र प्रतिभागिहरूको औसत क्रेडिट स्कोर वृद्धि १ 168 अ points्क हो।
Lending Circles समुदायको सदस्यहरुलाई एक अर्को समर्थन गर्न सशक्त गर्न साथी .णको आप्रवासी परम्परा को आकर्षित गर्दछ। सहभागीहरूले मासिक loanण भुक्तानी गर्दछन् र शून्य-ब्याज सामाजिक loansणहरू प्राप्त गर्दछ $500 देखि $2,500 सम्म। सबै paymentsण भुक्तानी क्रेडिट ब्यूरोलाई सूचित गरिएको छ, सहभागीहरूलाई एक क्रेडिट इतिहास निर्माण गर्न, क्रेडिट स्कोर बढाउन र अधिक वित्तीय स्थिरता तिर काम गर्न सक्षम पार्दै।
एलईडीसीका कार्यकारी निर्देशक मार्ला बिलोनिकले भने, "घर मालिक र उद्यमशीलता वरिपरि एलईडीसीको सम्पत्ति निर्माण कार्यक्रमहरू त्यति सफल हुन्छन् जब ग्राहकहरू ठोस historyण इतिहासबाट सुरू हुन्छन्," मार्ला बिलोनिक, कार्यकारी निर्देशक, एलईडीसीले भने। “हामी डीएसी क्षेत्रका ग्राहकहरुलाई १ टीटी T टी प्रदान गर्न एमएएफले छनौट गरेकोमा कत्ति उत्साहित थियौं किनभने क्रेडिट सशक्तीकरण वित्तीय सशक्तिकरण र सम्पत्ति निर्माणको लागि महत्वपूर्ण अंश हो। Lending Circles ले LEDC लाई अर्को उपकरण प्रदान गर्दछ जुन हाम्रो ग्राहकहरूको आर्थिक कल्याणमा सुधार गर्न र उनीहरूको सपनाहरू पूरा गर्न मद्दत गर्दछ। "
"हाम्रा ग्राहकहरू मेहनती, असाधारण प्रेरित उद्यमीहरू हुन्। एनभीएफएस एस्काला कार्यक्रमले केवल हराइरहेको कौशल र जानकारीहरू प्रदान गर्दछ ताकि उनीहरूलाई ब्यापारहरू हटाउन सहयोग पुर्‍याउँछन् जुन धेरै कम आय भएका आप्रवासीहरूले व्यवसाय सुरु गर्दा सामना गरिरहेका हुन्छन्, "एनभीएफएसका एस्केला कार्यक्रम व्यवस्थापक एड्रिएने केले भने। "यी अवरोधहरू मध्ये एक क्रेडिट र पूंजीमा पहुँच हो, र हामी रोमाञ्चित छौं कि एमएएफसँगको साझेदारीबाट हाम्रा ग्राहकहरूले किफायती loansणहरू पहुँच गर्न सक्नेछन्, historyण इतिहास निर्माण गर्नेछन् र आर्थिक रूपमा स्थिर भविष्यको तयारी गर्नेछन्।"
उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो (CFPB) को भर्खरको रिपोर्ट अनुसार, प्रत्येक १० मा वयस्क मध्ये एक को एक राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता रिपोर्टिंग एजेन्सी संग कुनै क्रेडिट इतिहास छैन, को लागी उनीहरुलाई क्रेडिट स्कोर को लागी केहि गर्न को लागी अविश्वसनीय चुनौतीपूर्ण बनाउँछ, सहित एक शिक्षा, एक व्यवसाय शुरू, एक कार भाँडामा वा घर किन्नुहोस्। यो समान रिपोर्टले पत्ता लगायो कि हिस्पैनिक उपभोक्ताहरू र कम आय भएका छिमेकका उपभोक्ताहरूसँग क्रेडिट स्कोर उत्पादन गर्न पर्याप्त क्रेडिट ईतिहास छैन वा पर्याप्त क्रेडिट ईतिहास हुन सक्दैन।
"क्रेडिट स्कोर बिना, त्यहाँ कुनै 'राम्रो विकल्प' हुँदैन जब तपाईं व्यवसाय सुरु गर्न वा सानो getण लिन चाहानुहुन्छ," जोएफ ए क्विनोनेज, सीईए, एमएएफले भने। "अब क्यापिटल वनको समर्थन र एलईडीसी र एनभीएफएस जस्ता साझेदारहरू मिलेर हामी देशको राजधानीमा काम गर्ने समाधान प्रदान गरिरहेका छौं।"
एलईडीसी, एनवीएफएस, एमएएफ र क्यापिटल वनले जुलाई 8 मा हुने एक कार्यक्रममा १ टीटी T टी को प्रक्षेपणको उत्सव मनाउनेछ।th वाशिंगटन, डीसीमा वेवर्कको कार्यालयहरूमा, जहाँ DMV लेन्डि। सर्कल सदस्यहरूले उनीहरूको अनुभव र कार्यक्रमको सफलताको बारेमा कुरा गर्नेछन्।
क्यापिटल वनको सामुदायिक विकास बैंकिंग, वरिष्ठ निर्देशक, डानियल डेलहन्तीले भने, "आजको अर्थतन्त्रमा फस्टाउनको लागि र तिनीहरूको वित्तीय सुदृढीकरणको लागि व्यक्तिको लागि कडा क्रेडिट इतिहास हुनु आवश्यक छ।" "ग्रेटर वाशिंगटनको गृहनगर बैंकको रूपमा, क्यापिटल वनले एलईडीसी र एनभीएफएससँग साझेदारी गर्न र १ टीटी T टीको क्षेत्रीय विस्तारलाई समर्थन गर्ने, टेक्नोलोजीको लाभ उठाउने, क्रेडिट रिपोर्टि's गर्ने र एमएएफको समुदायको शक्तिलाई दोहोर्‍याउने प्रमाणित ट्र्याक रेकर्डलाई व्यक्तिगत आर्थिक सफलतामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सहयोग पुर्‍याएकोमा गर्व छ। र स्थिरता। "
थप रूपमा, उनीहरूको भवन उद्यमशीलता अर्थव्यवस्था कार्यक्रमको एक भागको रूपमा, भर्जिनिया आवास र सामुदायिक विकास विभागले प्रिभिस विलियम काउन्टीमा विशेष जोड दिएर भर्जिनियामा १ टीटी T टीको विस्तार गर्न एनभीएफएससँग साझेदारी गरेको छ।
Lending Circles मा अधिक जानकारीको लागि, कृपया भ्रमण गर्नुहोस् lendingcircles.org
MAF र Lending Circles को बारेमा
एमएएफ मेहनती परिवारहरूको लागि उचित वित्तीय बजार बनाउनको लागि मिशनमा सान फ्रान्सिस्कोमा आधारित गैर नाफामुखी संस्था हो। यसको सामाजिक loanण कार्यक्रम, Lending Circles, मेहनती परिवारहरूलाई शून्य ब्याज loanण पहुँच गर्न, वित्तीय शिक्षा प्राप्त गर्न, र क्रेडिट इतिहास निर्माण गर्न सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा मद्दत गर्दछ। विश्वभरि व्यक्तिहरू otherण दिन्छन् र एक अर्कासँग orrowण लिन्छन् जब बैंक loansण विकल्प हुँदैन। टेक्नोलोजी र क्रेडिट रिपोर्टिंगको साथ, Lending Circles ले यो परम्परागत अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दछ formsण लिनेहरूलाई सस्तो loansणमा पहुँच गर्न, क्रेडिट इतिहास निर्माण गर्न, र वित्तीय स्थिरता निर्माण गर्न मद्दत गर्न। सामाजिक loanण कार्यक्रमहरूले व्यक्तिहरूलाई बैंक खाताहरू खोल्न, सिकारी ndणदाताहरू रोक्न, र द्रुत र सुरक्षित रूपमा तिनीहरूको क्रेडिट इतिहास निर्माण गर्न उनीहरूको क्षमता प्रदर्शन गर्दछ। Lending Circles ले कडा परिश्रम गर्ने परिवारहरूको लागि पैसा बचत गर्न, उच्च लागत debtण तिर्ने, र सिकारी ndणदाताहरूबाट स्वतन्त्र हुनको लागि एक सुरक्षित र भरपर्दो तरीका प्रदान गर्दछ, जबकि उनीहरूको फलिफापको लागि आवश्यक क्रेडिट बनाउँदै। एमएएफको बारेमा अधिक जानकारीको लागि, भ्रमण गर्नुहोस्: missionassetfund.org वा lendingcircles.org.
ल्याटिनो आर्थिक विकास केन्द्रको बारेमा
ल्याटिनो आर्थिक विकास निगम / केन्द्र (LEDC) एक नाफा नकमाउने 1०१ (c) ()) संगठन हो जुन १ 199 199 १ मा माउन्ट प्लीजन्ट समुदायमा नागरिक गडबडीको जवाफमा समाहित गरियो। २ years बर्षको लागि, हामीले DC समुदाय ल्याटिनो र अन्य सीमित परिवारहरूको क्षमता निर्माण गर्न व्यापक समुदाय र आर्थिक विकास सेवाहरू डेलिभर गरेका छौं। एलईडीसीको लक्ष्य भनेको कम स्वतन्त्र आयको ल्याटिनो र अन्य डि.सी. क्षेत्रका बासिन्दाहरूको आर्थिक र सामाजिक प्रगतिलाई वित्तीय स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नका लागि सीप र उपकरणको साथ सुसज्जित गरी उनीहरूको समुदायमा नेता बन्नु हो। LEDC ले चार मुख्य सेवा क्षेत्रहरू मार्फत आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्दछ: साना व्यवसाय विकास, माइक्रोलेन्डि,, किफायती आवास संरक्षण; र homeownership र फोरक्लोजर परामर्श। हामी वासि Washington्टन, डीसीमा हेडक्वार्टर र मैरील्याण्डको व्हीटन र बाल्टिमोरमा दुई उपग्रह कार्यालयहरू सञ्चालन गर्दछौं।
Escala को बारेमा
Escala, उत्तरी भर्जिनिया परिवार सेवा उद्यमीहरु को लागी सानो व्यवसाय कार्यक्रम, उत्तरी भर्जिनिया मा बसोबास कम र मध्यम आय परिवारहरु को लागी एक देखि एक सानो व्यवसाय विकास परामर्श र कोर्सवर्क प्रदान गर्दछ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य ग्राहकलाई घरमा आय आर्जन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, र स्थानीय अर्थव्यवस्थामा योगदान पुर्‍याउन सक्ने दिगो ब्यापारहरू विकास गर्नका लागि अवरोधहरू पार गर्नमा सहयोग पुर्‍याउनु हो।
क्यापिटल वनको बारेमा
क्यापिटल वन फाइनान्सियल कर्पोरेशन, म्याक्लिन, भर्जिनियामा मुख्यालय, फर्च्युन company०० कम्पनी हो जसको शाखा स्थानहरू मुख्यत: न्यू योर्क, न्यू जर्सी, टेक्सास, लुइसियाना, मेरील्याण्ड, भर्जिनिया र कोलम्बियाको जिल्लामा रहेको छ। यसको सहायक कम्पनीहरू, क्यापिटल वन, एनए र क्यापिटल वन बैंक (युएसए), एनए, उपभोक्ताहरू, साना व्यवसायहरू र व्यावसायिक ग्राहकहरूको लागि वित्तीय उत्पादन र सेवाहरूको बृहत्तर स्पेक्ट्रम प्रदान गर्दछ। देशभरका समुदायहरूप्रति यसको जारी प्रतिबद्धताको एक भागको रूपमा, क्यापिटल वनले हालसालै फ्युचर एज सुरू गरेको छ, १TP२२ टी १50० मिलियन प्रतिबद्धता। यसले आगामी Americans बर्षमा समुदायको अनुदान र पहलहरूको माध्यमबाट अधिक अमेरिकीहरूलाई डिजिटली चालु अर्थव्यवस्थामा सफल हुन सशक्त बनाउनेछ। फ्युचर एज र अन्य क्यापिटल वन ईन पहलहरूको बारेमा अधिक जान्नको लागि कृपया भ्रमण गर्नुहोस्